Dingana 7 mankany amin'ny Marketing Digital Nirvana | Martech Zone
Dingana 7 mankany amin'ny Marketing Digital Nirvana
Rehefa mampihatra paikady nomerika amin'ireo mpanjifantsika izahay dia matahotra sao tsy asehonay an-tsary sy hamaritana an'io tetikady io araka ny tokony ho izy. Tena mankasitraka ny Smart Insights aho tamin'ny nanambatra an'ity topy maso ny paikady marketing nomerika feno sy mahomby ary ny dingana tokony hataonao hampiharina. Te-hiara-hiasa amin'ireo mpanjifantsika aho mba hanehoana tsara an'io fomba fiasa io sy hampihatra ny refin'ny fahombiazana.
Fampahalalana vaovao an'ny Smart Insight mamaritra ny dingana azonao atao hanatsarana ny fampiasanao ny marketing nomerika. Mba hanampiana anao hampitaha ny fandrosoanao amin'ireo orinasa hafa nampidirin'izy ireo valiny tamin'ny fikarohana nataony tato ho ato momba ny raharaham-barotra fitantanana marketing nomerika, tatitra maimaim-poana.
Tags: dinikafahitana maranitra